Idlalwa kanjani amafayela avi on Nexus 7
Abantu abaningi baye bahlangana izinkinga ngokudlala ezinye amafayela avi kule evamile. Baye efakiwe MXplayer noma BSplayer, kodwa noma kunjalo kokuba inkinga kusukela ezimbalwa zazo ngeke ukudlala.
Mhlawumbe elidala amafayela avi awasekelwe kahle yilabo abadlali noma into abanye. Indlela bendawo yonke ukuguqula AVI format ku-Nexus 7 amafomethi natively ividiyo, njengawo MP4. Futhi, ungakwazi nciphisa video bese ulungise video nemingcele afana bit isilinganiso nokunye. silingane Nexus 7 kangcono, Ngicabanga uyoba nalo ukudlala nice nalo.
Ukuguqula ama avi for Nexus 7 akunamicikilisho eminingi. A Video Converter ( Video Converter for Mac ) bekwenza kahle. Lolu hlelo lokusebenza elikhulu isinikeza i esethiwe eliphezulu Nenus 7. Asikho okudingeka uyenze yimuphi omunye izilungiselelo ngesandla bese nje bamane ukhetha iphrofayli kwesokudla ngokuchofoza okukodwa.
Okokuqala ukulanda version kwecala ye Ukugunda Converter ( amawindi noma Mac )
Bese landela izinyathelo ezingezansi:
Step 1: Run lolu hlelo bese wengeza amafayela AVI kuya Converter
Ngemuva ukufaka Converter ividiyo, uzoba angene esibonakalayo iphutha. Bese, hit inkinobho "Engeza Amafayela" on the phezulu-kwesokunxele ukuze wengeze ividiyo amafayela, noma wena Ungahudula bese uphonsa amafayela AVI ngqo.
Step 2: Khetha esethiwe eliphezulu Nexus 7
On ilungelo software. Chofoza le "Device" ithebhu, futhi bakhethe "Ohters" > "Nexus 7". Isofthiwe ziye elungiselelwe esethiwe for Nexus 7, ngqo khetha it ngaphandle nezinye izilungiselelo manual.
Step 3: Qala Guqula AVI kuya Nexus 7
Ngemuva akhethe inani yohlelo, Chofoza "ukuguqula" Inkinobho ukuqala ukuguqulwa. Kwamaminithi ambalwa, uzothola incwadi ethi wonke yalomsebenti Kuye usuqedile.
Step 4: Dlulisa aguqukile video amafayela Nexus 7
Ungathola ngokushesha uthole lezo amafayela okuphumayo by "Ifolda Vula". Yibe ukuxhuma Nexus yakho 7 ekhompyutheni nge ikhebula bese udonse amafayela aguqukile in. Well, ajabulele nokuqukethwe the elimangalisayo ividiyo manje.
Posted on July 28, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba Video / Audio SolutionAmathegi ukuguqula avi kuya mp4, Guqula avi ukuze Nexus 7, ukudlala avi on Nexus 7
Langaphambilini post Previous: Indlela ukuze alulame izithombe for iPhone kusukela Backup iTunes
Next post Next: Indlela ukuze alulame elilahlekile noma ususiwe Imibhalo Word